ZTE na-ekpughe nkọwa nke Hawkeye Gam akporosis
ZTE chọrọ ịbịaru nso dị nnọọ nso na gam akporo gam akporo na n'ihi nke a mere o ji meebe a ọnụ dabere na aro tozuru oke site na ọtụtụ puku ndị ọrụ. A smartphone nke "esi nri" na nke onye ahịa, ọ ga-ewepụ ihe ZTE ma ọ bụ ụdị ọzọ na-eche bụ ihe ndị ọrụ chọrọ n'ezie.
Ekwentị a dabere na nchịkọta mmadụ na aha a họọrọ mechaa hawkeye. Ọ bụ taa mgbe ụlọ ọrụ China kwuputara nkọwa na atụmatụ nke Hawkeye mgbe ọtụtụ ọnwa gbasasịrị igwe mmadụ. Ekwentị a sitere na Project CSX ebe ZTE nyere ndị ọrụ ohere iji mepụta nrọ ha.
Ngwaọrụ nwere batrị buru ibu 3.000 mAh ikike na nhazi Qualcomm Snapdragon 625. Ọ na-agụnye kamera abụọ na azụ nke 12 na 13 MP na mbugharị anya. A na-ahụkarị atụmatụ a na ekwentị adịkarịghị ka ZTE nwee ike itinye ya na nke a.
I nwekwara ike họrọ agba ị chọrọ Site na peeji cxz.zteusa.com. Ndị a bụ njirimara ya bụ isi:
Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz mgbawa
5,5 anụ ọhịa ahụ 1080p
3.000 mAh batrị na Qualcomm Ndenye Nchaji 2.0
32GB n'ime nchekwa (gbasaa ruo 256GB)
Igwefoto azụ na 12 MP na 13MP nhazi abụọ na mbugharị anya
Njikọta: WiFi, Bluetooth, GSM, 4G LTE, NFC
Ọdụ ụgbọ USB Type-C na-akwụ ụgwọ, SIM abụọ, ihe mmetụta mkpịsị aka, ụda Hi-Fi
Ọnụ nke ị nweghị ike ịgwa ya ihe ọ bụla site na ịbata kpamkpam site na echiche nke obodo nke na-etinye echiche ha maka ihe ọdụ ga-abụ. Anyị amaghị nha ihuenyo ahụ, agbanyeghị na ihe niile yiri ka ọ na-egosi na anyị ga-ekwu maka mkpebi 1080p, wee gbakwunye na mgbawa Snapdragon 625, zuru oke maka arụmọrụ ike dị mma, ngwaọrụ a ga-enwe nnukwu ndụ batrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE na-ekwupụta nkọwa nke Hawkeye, ama ya site na igwe mmadụ